बाजुरा र दैलेखी एचआईभी संक्रमित महिला काठमाडौंमा |
बाजुरा र दैलेखी एचआईभी संक्रमित महिला काठमाडौंमा
स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रश्न : हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार खै ?
प्रकाशित मिति :2017-01-08 13:26:16
बाजुरा र दैलेख बाट आएका एचआईभि संक्रमितहरु सामान्य बाच्न पाँउने अधिकार समेत हनन भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रि गगन थापा सँग विहिवार मन्त्रालयमा छलफल गर्दै ।
काठमाडौं। ‘गगन थापाको नाम धेरै सुनेका थियौं केही गर्छन्, होला भनेर काठमाडौं आएका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेकी बाह्रविस बाजुराकी एचआईभी संक्रमित महिला मीना विकले वताईन् । ‘खाली पेटमा एआरभि (एण्टी रेट्रो भाइरल) खान थालेको ४ वर्ष भयो । रुखो मानासँग औषधि खाँदा आफूहरू जिवन र मरणको दोसाधमा पुग्यौं, मन्त्रीले त केही गर्छन् भनेर हामी यहाँ आइपुगेका छौं’ उनले भनिन् ।
सम्पति जति श्रीमानको उपचार सक्यौं, न श्रीमान बाँचे न सम्पति नै । परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता त छँदै छ, सुख्खा रोटीसँग औषधि खाँदा कमजोरी छौं दैलेख राकम कर्णालीकी नानी देवी शाहीले मन्त्री थापासमक्ष दुःख विसाइन् । गाउँमा रेडियोमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको नाम धेरै सुनेका थियौं, सबैले गगन थापा हाई हाई भन्थे त्यसैले हामी संक्रमित महिला मन्त्रीलाई भेट्न आएको शाहीले वताईन् ।
एचआईभी संक्रमितहरूको सामान्य बाच्न पाउँने अधिकारसमेत हनन् भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई संक्रमितहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । त्यो सँगै राष्ट्रिय यौन तथा एडस नियन्त्रण केन्द्र र महिला आयोगमा आफ्ना समस्याहरू ज्ञापन पत्र मार्फत बुझाएका छन् ।
बाजुराको विकट बाह्रबिस र दैलेखको विकट गाउँ राकम कर्णालीबाट आएका संक्रमित महिलाले आफूहरूको अवस्था दयनिय भएको भन्दै मन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकाय कहाँ पुगेको मीना विकले वताइन् । आफूहरूले पोषण विना नै खाली पेटमा एआरभी खाने गरेका छौं । आर्थिक अवस्थासँगै पोषणयुक्त खान नपाउने भएकाले संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर हुँदै आएकोले समस्याको सुनाई हुन्छकी भनेर काठमाडौं पुगेको उनको भनाइ छ ।
उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाए । बाजुरा र दैलेख जिल्ला अस्पतालमा cd4 काउन्ट मेसिनको व्यवस्था हुनुपर्ने, एआरभी औषधिसँग पौष्टिक आहारको अनिवार्य व्यवस्था संक्रमित परिवारका बालबालिकाको शिक्षाको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था, संक्रमितहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र आयआर्जनका कार्यक्रम हुनुपर्ने जस्ता माग राखेर मन्त्रीलाई भेटेको दैलेख राकम कर्णालीकी नानी देवी शाहीले वताउनुभयो । आफूले एआरभी औषधि सेवन गर्न लागेको ७ वर्ष भईसकेको भन्दै ४ वर्ष अघिसम्म एआरभी औषधिसँगै पौष्टिक आहार (लिटो पिठो) समेत पाइने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले त्यो नपाउने भएपछि स्वास्थ्य निकै कमजोर भएको भन्दै मन्त्रीसमक्ष उहाँको गुनासो थियो ।
बाजुराको बाह्रविस गाबिसकि एचआईभि संक्रमित मिना विक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्ना पिडा पोख्दै ।
संक्रमित जला माझी भन्नुहुन्छ ‘भएको सम्पत्तिले श्रीमानको औषधि गर्‍यौं, श्रीमान पनि बचेनन् अनि खानलाई सम्पत्ति पनि छैन् ।’ घरमा पौष्टिक आहार खान पाउँदैन खाली पेटमा एआरटी खानाले निकै कमजोरी भएर बिरामी भएको माझि बताउनुहुन्छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले संक्रमितलाई सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो । राष्ट्रिय यौन तथा एड्स रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई अवस्था बुझेर उनीहरूको समस्यामा सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले संक्रमितका समस्या समाधानमा केही कार्यक्रम ल्याउने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संक्रमित भएकै कारणले कोहीपनि समस्यामा पर्न नहुने भन्दै मन्त्री थापाले भन्नुभयो ‘तपाइहरू घर पुग्दासम्म तपाइहरूका केही माग पुरा हुनेछन् ।’
राष्ट्रिय यौन तथा एडस रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डा. अरुण पौडेल कहाँ समेत पुगेका संक्रमितहरूले सरकारसँग बजेट नभएकाले एआरभीसँगै पौष्टिक आहार दिन नसकेको जवाफ पाए । यो वर्षदेखि बिरामीलाई महिनाको ५ केजीका दरले पौष्टिक आहार दिन लागेको जानकारी पौडेलले दिनुभयो ।
नेपालमा एचआईभि संक्रमित ४९ हजार ३ सय ९६ जना रहेको र ति मध्ये १२ हजार ४ सय ४४ ले एआरभि सेवन गने गरेका तथ्याङ्क उहाँले दिनुभयो । एआरभी सेवन गर्ने सबैलाई पौष्टिक आहारको व्यबस्था गर्ने वचन उहाँले दिनुभयो । साथै बाजुरा र दैलेख जिल्लामा एच आइ भी जाँच गर्ने मसिनको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
संक्रमित महिलाहरू राष्ट्रिय महिला आयोगमा समेत पुगे । संक्रमित भएकै कारण समाजबाट अपेहिलत हुनुपर्ने, कुपोषणको शिकारमा संक्रमित महिला हुँदासम्म राज्य बेखबर भएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव राम प्रसाद भट्टराईलाई पनि उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाए । आयोगमा रुँदै संक्रमित मीना विकले संक्रमित भएकै कारण समेत आफूहरू विभिन्न पीडामा परिरहँदासम्म राज्य बेखबर भएकामा गुनासो गर्नुभयो । भन्नुभयो ‘हजुरका खुट्टा छोएर ढोग गर्छौं, हाम्रा समस्यामाथि निगरानी गरिदिनु पर्‍यो ।’
अधिकांश एचआईभि संक्रमितहरू गरिब र न्युन आर्थिक अवस्थाका रहेका छन् । “सामान्य छाक टार्न समेत धौ धौ भएकाहरूलाई पौष्टिक आहार किनेर खान सक्ने अवस्थै नभएको खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी अशोक सिंहले वताउनुभयो ।